Barcelona Oo Iibineysa Sergio Busquets Si Ay Boos Uga Hesho Franck Kessie
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo iibineysa Sergio Busquets si ay boos uga hesho Franck Kessie
October 13, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Kooxda Barcelona ayaa lagu soo waramayaa in ay diyaar u tahay in ay iska iibiso xiddiga khadka dhexe ee Sergio Busquets si ay boos ugu baneeyaan xiddiga kooxda AC Milan ee Franck Kessie .
Kooxda lacagta caddaanka ah haysata ayaa lagu xantaa inay Kessie ka dhigtay bartilmaameedka koowaad ee suuqa Jannaayo, in kasta oo xaaladdooda dhaqaale ee weli liidato.
Barca kaligeed ma ahan inay muujiso xiisaha ay u qabto 24-jirkan iyadoo sidoo kale lala xiriirinayo Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur, Manchester United, Liverpool iyo Chelsea.
Sida laga soo xigtay El Nacional , kooxda reer Catalan ayaa aad uga dhab ah saxiixa Kessie oo xitaa waxay diyaar u yihiin inay u huraan Busquets, kaasoo laf dhabar u ahaa 14 -kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay.
Waxaa la sheegaa in Barca ay weli rumeysan tahay inay lacag badan ku iibin karto iibinta Busquets, taasoo u oggolaaneysa inay dib u cusbooneysiiyaan kooxdooda marka lagu daro Kessie.
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Ivory Coast Kessie ayaa qandaraaskiisa San Siro wuxuu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedkan, laakiin waxaa laga yaabaa inuu heshiis cusub la gaaro Milan toddobaadyada soo socda.